Shabaab oo xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidanka Dowladda iyo kuwa Amisom ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by admin 14th September 2015 078
Ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Degmada Yaaqshiid iyo Degmada Heliwaa.
Xoogag ka tirsan Ururka Shabaab ayaa beegsaday labadan difaac oo ku kala yaala Isgoyska Towfiiq, gaar ahaan halka loo yaqaan Telefishinka oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Nabad Suggida Somaliya.
Mar qura ayaa halkaasi laga maqlay dhawaqa rasaasta fudud oo dhinacyada ay isku weydaarsadeen halkaasi, waxaana intaasi kadib ciidamada dowladda soo gaaray gurmad kaga yimid ciidamada ku sugan Xaafada caymiska ee Degmada Yaaqshiid.
Dagaalka oo ahaa mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ayaa ciidamadii weerarka soo qaaday waxa ay la kulmeen iska caabin kaga timid ciidamada Dowladda oo gurmad helay, waxa aynta taasi keentay raggii hubaysnaa ee Shabaabka ka tirsanaa inay u cararaan dhanka Xaafada gubta oo markii hore ay kasoo baxeen, sida dadka deegaanka ay sheegeen.
Sidoo kale ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa weeraray halka loo yaqaan Warshada Baastada oo ciidamada Amisom fariisimo ay halkaasi ku leeyihiin, waxaana dagaalkaasi Shabaabka ay u adeegsadeen qoriga loo yaqaan sabanka ee garbaha laga rido oo dadka deegaanka ay maqlayeen.
Dagaaladaan ilaa hada lama oga khasaaraha ka dhashay, hayeeshe waxa ay tani muujinaysa in Shabaab weli ay awood u leeyihiin inay beegsadaan difaacyada ciidamada ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho.
Moha Faarah oo ku guuleeystay Orodka 5000 Kun Ee Mitir kadib